Wasiirka Maaliyadda DFS oo daah furay mashruuc shaqo loogu abuurayo Dhalinyarada
February 13, 2018 - Written by Editor
Muqdisho:– Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daah furay mashruuc ku saabsan shaqo abuur loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dahfurka mashruucan oo ah mid looga tala galaay habka shaqo Abuurka looga sameyn karo dhalinyaradda Soomaaliyeed iyo kaalinta horumarinta Dalka islamrkaana laga qeyb qaato sidii Dalka looga fulin lahaa mashaariic wax tar u leh bulshada Soomaaliyeed.
Xubno ka socday Dowladd Gobaleedyadda xubnaha ka ah Dowladda Dhaxe iyo Gobalka Banaadir ayaa si isku mid ah isugu raacay in muhiim ay tahay in laga wadda qeyb qaato horumarka dalka iyo sidii kaalinta Dhalinyaradda Soomaaliyeed looga abuuri lahaa shaqo si looga bad baadiyo tahriibka iyo ku biirista kooxaha arggagixisada.
C/risaaq Mohamed Abukar Ku xigeenka xisaabiyaha guud ee Qaran oo ka hadlaay madasha dahfurka mashruucan shaqo Abuurka ayaa shegaay in xafiiska xisaabiyaha guud uu mar walibo diyaar u yahay ka shaqenta shaqo abuukar iyo howlaha guud ee lagu horumarinayo dalka.
Wasiirka Wasaradda Howlaha Guud ee Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaashi ayaa shegay in muhiim ay tahay in mar walibo laga qeyb qaato shaqo abuurka Dhalinyaradda.
‘’Waxaa loo baahan yahay kordhinta wax soo saarka Dalka iyo shaqo abuurka loo sameeyo Dhalinyradda Soomaaliyeed,si ay ugu qeyb qataan hormarka iyo mustaqbalka dalka’’. Ayuu Yiri Wasiir Beyle.